Diyopost.com :: सिरिया युद्धको रहस्य ! सिरिया युद्धको रहस्य ! - Diyopost.com
सिरिया युद्धको रहस्य !
श्रीदेवीको निधन र सिरिया आक्रमण एकैचोटि जस्तो पर्यो । यसले नेपाली फेसबुके सेलेब्रिटीहरुलाई पनि स्तब्ध बनायो । मृत्यु र युद्ध प्राणीका लागि खेदजनक कुरा हो, यसमा कुनै विमति रहेन ।
कुनै शोषित–पीडितहरु बाँच्दासम्म उनीहरुको समान हकका लागि आवाज नउठाउने, सहयोग नगर्ने तर मरेपछि लासमा पैसा फाल्ने हामी जुन समाजमा छौँ, त्यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय दुःखद घटनाहरुमा खेदहरु व्यक्त हुनु नौलो होइन । श्रीदेवी मलाई मनपर्ने एक कलाकार हुन्, उनको कलालाई भारतले कसरी प्रयोग गर्यो, आफ्नै ठाउँमा छ ।
जहाँसम्म सिरिया युद्धको कुरा छ । सिरियाको युद्ध खासगरी रुस र अमेरिकाको युद्ध हो । युद्धको जडमा रुस र अमेरिकाको जस्तोसुकै स्वार्थ होस्, यस युद्धको परिभाषा र प्रयोजन उनीहरुले जसरी गरुन्, यो एक भयानक हस्तक्षेप र दादागिरी हो ।
सिरिया युद्धको पिँधमा धर्म छ । यो खासगरी सिया र सुन्नी समुदायबीचको अबुझपन हो । सिरियामा बसर अल असादको सरकार छ, असाद सिया समुदायका हुन् । त्यसैले उनको सरकारलाई सिया सरकार भनेर पनि बुझ्ने गरिन्छ । तर, सिरियामा सुन्नी समुदाय बढी छन्, झन्डै ८० प्रतिशत । असादको सरकारलाई रुस, इरान र चीनको पनि समर्थन छ ।
यहाँ विभिन्न समूहले सरकारविरुद्ध आवाज उठाएका छन्, उनीहरु आफ्नो समुदायको पनि सरकार चाहन्छन् । त्यहाँ एउटा विद्रोही नागरिकहरुको फ्रि सिरियन आर्मी छ, जसलाई त्यति चरम पन्थी मानिँदैन ।
यसले असद सरकारलाई हटाएर धर्मनिरपेक्ष सरकार बनाउन चाहेको भनिन्छ । यसलाई अमेरिका, युके, फ्रान्स, जर्मनीलगायतको सहयोग छ । त्यस्तै यहाँ चरमपन्थी समूह पनि छन्, जो असदलाई हटाएर इस्लामिक सरकार ल्याउन चाहन्छन् ।
यहाँ कुर्दहरु पनि छन्, कुर्दहरु पहिलो विश्वयुद्ध पछिको सिमानाका कारण तीन देशका बाँडिएका छन्, सिरिया, इराक र टर्कीमा । सिरियाका कुर्दहरु पनि विद्रोहमा छन्, उनीहरु आफ्नो स्वायक्त क्षेत्र चाहन्छन् ।
अमेरिकाको भाषामा सिरियामा आतंककारी समूह र गतिविधि अमेरिकाका लागि खतरनाक छ । त्यसैले यहाँ फ्रि सिरियन आर्मीकै सरकार आउनुपर्छ । आफ्नै छिमेकी मुलुकमा अमेरिकाको हस्तक्षेप देखेपछि रुसले त्यहाँको सरकारलाई सहयोग गर्यो । यसबाहेक यहाँ विविध लफडाहरु पनि छन्, सिमानका देश वा इस्लामिक कट्टरपन्थी समूहहरुलाई लिएर ।
सिरियामा त्यहाँकै जनताबीच छलफल हुन आवश्यक छ । सबै समूह, समुदायले स्पेस पाउन अर्थात् समावेशी हुन आवश्यक छ । यसका लागि धार्मिक वा जातिगत भएर होइन कि स्वतन्त्र रुपले उनीहरुबीच नै बहस हुन आवश्यक छ । र, त्यहाँ विकसित भनिएका मुलुकले त्यो शिक्षा वा मुद्दाका लागि अभियान चलाउन आवश्यक छ । तर, धार्मिक अबुझपनका कारण यो सब भइरहेछ ।
नेपालका कतिपय युवा, जो दिमागमा जातीय विभेद, छुवाछुत र सामन्त सोच बोकेर हिँडेका छन्, उनीहरु नै सिरियाको युद्धमा भावुक भएका छन् । यहाँ भावकुताले कुनै काम गर्दैन । यहाँ त विवेकको काम छ ।
कसरी संसारका मानिसहरुलाई धार्मिक कट्टरपन्थी हुनबाट रोक्ने यो एउटा मुद्दा हो, तर अमेरिकालगायत देशले मुस्लिम देश वा इस्लामिक विद्रोहीलाई नै अर्घेलो देखेजस्तो लाग्छ ।
पहिलो विश्व युद्धमा हतियार बेचेर धनी भएको देश अमेरिका, आप्रवासीहरुको देश अमेरिका, उसको चिन्तन पनि त्यस्तै त्यस्तै छ । आफूलाई शक्तिशाली देख्ने रुसको पनि घमन्ड बढ्दो छ । त्यसैले हामी न्यायप्रेमीहरुले मानिसहरुलाई धार्मिक कट्टरपन्थी वा जातिवादी हुनबाट रोक्न आवश्यक छ, मानिसलाई केवल मानिस बनाउनतिर सोच्न आवश्यक छ ।
ध्रुवसत्य परियारकाे फेसबुकबाट साभार